ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: November 2013
ဖိုးတေ တို့မိသားစု နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ကို လူတွေကတော့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ခြေထောက်တစ်ဖက် လက်တစ်ဖက် မရှိတဲ့ ဒုက္ခိတအဖေရယ် အမေရယ် ဖိုးတေရယ် ကျူးကျော်ရက်ကွက်လေးထဲက မြေစိုက်တဲလေးမှာ တူတူနေကြသည်။ ဖိုးတေက သူငယ်တန်းမှ တတိယတန်းအထိ ကျောင်းနေခဲ့သည်။ လာမယ့်နှစ် စတုတ္ထတန်းကို ဖိုးတေကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျောင်းမတက်ချင် ဖိုးတေအမေကိုယ်တိုင်ကလည်း တစ်ရိပ်ရိပ်တက်လာတဲ့ ကျောင်းစားရိတ်ကို မလိုက်နိုင်တာကြောင့် ဖိုးတေကို ကျောင်းထုတ်ပစ်မည်ဟု ပြောသည်။ ဖိုးတေပျော်သည်။ အမေလည်း ပျော်သည်။ မပျော်သည်က ဖိုးတေ ရဲ့ အဖေ တစ်ယောက်တည်း။
အဖေက မ၀ံ့မရဲ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး ပြောသံတော့ ဖိုးတေ ကြားသည်။ ဒါပေမယ့် ဖိုးတေ ဆုတောင်းပြည့်သည်။ ဖိုးတေရဲ့ အမေသည် ဒီအိမ်ရဲ့ ငွေကိုင်ရှင် ငွေရှာရှင် ဖြစ်သောကြောင့် တစ်သွေးတစ်သံ တစ်ခါထဲနှင့် ပွဲပြတ်သွားသည်။
“ကျုပ် အသက်ကြီးပြီး အရင်လိုမလှနိုင်တော့ဘူး အလုပ်အကိုင်ကလည်း မကောင်းတော့ဘူး။ “
ထိုတစ်ခွန်းထဲနှင့်ပင် အဖေသည် မည်သည့်စကားမျှ ထပ်ပြီး မပြောတော့ပေ။ ဖိုးတေတို့ အိမ်လေးရဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံးနေရာလို့ ပြောနိုင်သည့် အဖေလှဲနေကျ ယိုင်နဲ့နဲ့ ကွပ်ပျစ်လေးမှာ အမေ့ကို ကျောခိုင်း၍ အဖေပြန်ပြီး လှဲချလိုက်သည်။ အဖေရဲ့ ကျောပြင်သည် တစ်ချက်တစ်ချက် လှုပ်ခတ်သွားသလို ရှိသည်။ အမေက စိတ်မကောင်းသလိုနှင့် အဖေ့ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်း တဲပေါက်ဝမှာ မတ်တပ်ရပ်နေသော ဖိုးတေ အား.
“သားရေ အမေ အလုပ်သွားလိုက်အုန်းမယ်။ ထမင်းအိုးထဲမှာ ထမင်းကြမ်းရှိသေးတယ်။ မနေ့က အမေ၀ယ်လာတဲ့ ငါးပိရည်ကို နည်းနည်း ရေနွေးပြန်ရောလိုက်။ ပြီးရင် ဟိုဘက်ခြမ်းမှာ ကန်စွန်းညွှန့် တွေတက်နေတာ အမေ တွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒါလေး နည်းနည်း သွားခူးပြီး သားရယ် သားအဖေရယ် အဆာပြေ စားထားနှင့်။ အမေ မနက်ဖြန် မနက် အလုပ်က ပြန်လာမှ ဆန်နဲ့ ဟင်းချက်စရာ ၀ယ်ခဲ့မယ်နော်။ ကဲ အမေ သွားပြီ။”
ဖိုးတေ အမေ့ကို ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။ ဒီနေ့ အမေ အလုပ်အဆင်ပြေပါစေ။ ဒါမှ ဖိုးတေ ကြက်သားဟင်းလေး ဘာလေးစားရမှာ။ခဏနေ အမေပြောတဲ့ ကန်စွန်းရွက်ခူးရင်း ငါးရှဉ့်လေး ထိုးလိုက်အုန်းမယ်။ အဖေက ငါ့ရှဉ့် မီးကင် ကြိုက်သည်။ အဖေပြောတာတော့ ချက်ရင် ပိုကောင်းတယ်တဲ့။ ဆီမရှိတာနဲ့ ကင်စားကြသည်။ ကင်ရတာက လွယ်တယ်လေ။ ချက်ရင် ဆီ ကြက်သွန် ငရုတ်သီး ထင်း ပိုကုန်တယ်ဟု အဖေပြောဖူးသည်။
အမြဲတမ်းလိုလို အိပ်ယာထဲလှဲနေရသည့် အဖေ့ကို ဖိုးတေ သနားသည်။ ဘာဖြစ်လို့ ခြေတစ်ဖက် လက်တစ်ဖက် မရှိတော့တာလဲ လို့ မေးဖူးသည်။ ထိုအခါ အမြဲလိုလိုနွှမ်းလျနေတတ်သော အဖေ့မျက်နှာသည် ပြုံးရိပ်သန်းရင်း ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနှင့်
“အဖေက စစ်သားကွ တိုက်ရင်း မိုင်းထိတာ” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးသည်။
“ဘာလို့ စစ်သားလုပ်တာလဲ” အဖေ့ ရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူစိတ်ဝင်စားစွာ ဆက်မေးမိသည်။
“စစ်သားကောင်းကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်လို့။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ပေးချင်လို့ ပေါ့။”
“ဒါဆို နိုင်ငံတော်ကြီးဆိုကရော အဖေ့ကို ကာကွယ်ပေးလား..”
တစ်ကယ်တော့ ဖိုးတေက မသိလို့ မေးမိတာ ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ထိုနေ့က အဖေ ညနေစာ ထမင်းမစားပဲ သူ့ကိုကျောပေးရင်း အဖေ့ရဲ့ ကျောပြင်သည် တစ်သိမ့်သိမ့် လှုပ်ခါနေခဲ့သည်။
“သား ဒီနားကို လာပါအုန်း”
ကန်စွန်းရွက် တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နှင့် ကြိုးမှာ သီထားသည့် ငါးရှဉ့်သုံးကောင်ကို ဆွဲရင်း ဖိုးတေ အောင်နိုင်သူကြီးတစ်ယောက်လို အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ပေါက်ဝ အရောက် အဖေ့ခေါ်သံကြောင့် ကန်စွန်းရွက်တွေကို မြေကြီးပေါ်ချလိုက်သည်။ ငါးရှဉ့်တွေကို အိမ်ပေါက်ဝ တံခါးအစွန်းတွင် ချိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အဖေ့ဘေးနားတွင် သွားထိုင်လိုက်သည်။ သူရောက်လာတော့မှ အဖေက..
“သားက ဘာလို့ ကျောင်းမတက်ချင်တာလဲ”
“မပျော်လို့ ပါ အဖေ”
“င့ါသားက ဘာလို့ မပျော်တာလဲကွ”
“သားမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ သူတို့အမေတွေက ပြောထားတယ် သားနဲ့ သူငယ်ချင်း မလုပ်ရဘူးတဲ့။ ”
အဖေက “သြော် ရွံလို့တဲ့ လား ” ဟု ရေရွတ်သည်။
ပြီးတော့ အဖေသူပိုင် ကွပ်ပျစ်လေးမှာ ဖိုးတေကို ကျောပေးပြီး ပြန်လှဲနေပြန်သည်။ ခဏနေ အဖေ့ကျောပြင် တစ်သိမ့်သိမ့် လှုပ်ခါလာတော့မည်ကို ဖိုးတေသိသည်။ ဒီနေ့ညနေလည်း အဖေ ထမင်းစားဖြစ်မည် မထင်။ သူလဲ တဲပေါက်ဝ ပြန်ထွက်လာရင်း ကန်စွန်းရွက်တွေကို အနေတော်ဖြတ် ငါးရှဉ့်တွေကို သေသေချာချာ ရေဆေး။ ပြီးတော့ မီးမွှေးပြီး ငါးရှဥ့်တွေကို စပြီကင်လိုက်သည်။ ခဏနေ ငါးရှဉ့်မီးကင်မှ အနံ့လေး တစ်ဖြည်းဖြည်းသင်းလာပေတော့မည်။
ဖိုးတေတော့ဖြင့် အနားများပဲ့နေသည့် ကြွေရည်သုတ်ဇလုံ တစ်ခုထဲတွင် ထမင်းကြမ်းခဲကြီးထည့် ။ ဘေးနား မြေကြီးပေါ်မှာ ငါးပိတစ်ခွက်ချထားသည်။ ပြီးတော့ ပေါက်နေသော ဇကာကြီးထဲမှာ ခူးလာသည့် ကန်စွန်းညွန့် တို့ကို အသင့် လုပ်ထားရင်း မီးဖိုပေါ်က ငါးရှဉ့်ကင်ကို သရေ တစ်များများ လျှာတစ်သပ်သပ်ဖြင့် စောင့်စားကာ နေလေတော့ သည်။
ချစ်စွာသော ဘလော့ မောင်နှမများ အားလုံးကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။
ပုံလေးကိုတော့ google ကနေ ရှာဖွေပြီး အသုံးပြုထားပါတယ်။
လူတွေ လူတွေ တော်တော်ခက်ကြတာပဲ။ ကိုယ့်ဝမ်းစာ ကိုယ်ရှာစားနေရတာ။ ပိုက်ဆံမရှိရင် စိတ်ဆင်းရဲရတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိတာ။ ဘေးကနေ သူတို့လဲကူနိုင်တာမဟုတ်။ ကိုယ်လုပ်နေတာကြပြန်တော့လဲ ဘေးကနေစေ့စေ့ကြည့်ပြီး အတင်းဆိုတာ တုတ်ကြ သေးတာ။ ကျွန်မလဲ အစကတော့ ဂရုစိုက်ပါတယ်။ လူပြောစရာလေးများ ဖြစ်မလားဟဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲနေနေ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာက ချီးမွှမ်းဖို့ဆိုရင်သာ ခက်နေတာ ကဲ့ရဲ့တာဖို့ဆိုရင်တော့ နေ့မကူးဘူးရက်ကွက်ထဲသတင်းပြန့်တာမြန်ပ။
အင်းကျွန်မလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကလဲ ငါးရောင်းတာကိုး။ ဒီတော့ ဈေးသည်ဆိုတာမှ အော်ကြော်လန် ၀က်ဝက်ကွဲ ငါးစ်ိမ်းသည် ဆိုတာကို ယူထားတာ။ ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်မလို ဘ၀တူတွေကို နှိမ်လိုက်တာမဟုတ်ရပါဘူး။ လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုက ငါးစိမ်းသည် ဆို အပေါက်ဆိုးတယ် အလေးခိုးတယ် စွာလန်ကျဲတယ် အဲဒီလိုမူသေ မှတ်ယူထားကြတာမဟုတ်လား။တစ်ကယ်လဲ ကျွန်မစွာပါတယ်။ မဟုတ်ရင် မခံတာလေးတစ်ခုပါပဲ။ အဖေဆုံးသွားပြီးထဲက အမေကလဲ ဘာမှ မလုပ်တတ် မောင်လေးကလဲ သုံးလေးနှစ်လောက်ရှိသေးတာ။ ပိုက်ဆံ ဆိုတာတော့မေးမနေနဲ့ အမေ့လည်ပင်းက ရွှေကြိုးလေးတောင် အဖေ့အသုဘစားရိတ် လုပ်လိုက်ရပါရောလား။ ဒီတော့ ရက်လည် ကရတဲ့ ကူငွေလေးနဲ့ အမေ့နားကတ်လေးထပ် ရောင်းပြီး ကျွန်မလဲ လောကကြီးထဲ ကုန်စိမ်းသည် အနေနဲ့ ခြေပစ်လက်ပစ်ဝင်ချလိုက်ရတာ။
ဒါပေမယ့်တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကျွန်မက ငယ်ငယ် လေးထဲကစွာတယ်။ရဲတယ်။ လူသိပ်မကြောက်တတ်ဘူး။ ကုန်စိမ်းစပြီးရောင်းစကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ နေ့တိုင်းမျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်။ ဈေးရောင်းလို့မကောင်းတာကတစ်မျိုး။ ဘ၀တူတွေအချင်းချင်း အလိမ်ခံလိုက်ရတာက တစ်ဖုံ။ နေရာမရလို့ ဗန်းကြီး ခေါင်းရွက် ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့ ဈေးကောက်ကို မျက်နှာလုပ်ရတာကတစ်မျိုး။ အရင်းလေးများပြုတ်တော့ မလားဟဲ့လို ရင်တစ်မမနဲ့စ ခဲ့ရတာ။
တစ်ခါတစ်လေများဆို အိမ်မှာဆန်ပြုတ်တောင်နပ် မှန်တာမဟုတ်ဘူး။အိမ်လခကလဲ ပေးရသေး။ မပေးရင်လဲ လမ်းဘေးတဲထိုးပြီး နေရမယ့်ဘ၀။ ဒီတော့ လျှော့စားပြီး အိမ်လခပေးရတော့တာပဲ။ ပိုက်ဆံမရှိ မျက်နှာမွဲမို့ အမယ်လေး ကူမယ့်သူမပြောနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲခေါ်မယ့် ပြောမယ့်သူ ရှိကို မရှိတာ။ ပိုက်ဆံလေးများချေးလိုက်မယ်လေလို့ မတွေးနဲ့ နေ့ပြန်တိုးနဲ့ကို နစ်မှာ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ လူရည်လေးလည်လာတော့ ကိုယ်က အပြောကောင်း အဆိုကောင်း စေတနာလေးလဲ ထည့်ရောင်း တော့ ကျွန်မတို့မိသားစု ထမင်းနပ်မှန်ရုံတင်မက။ ငွေလေးကြေးလေး နဲနဲ စုမိလာတယ်။
ပြီးတော့ အိမ်ကအငယ်ကောင်လဲ ကျောင်း တက် ရတော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်မလဲ အကုသိုလ်ပေမယ့် ပိုက်ဆံရဖို့က အဓိကမဟုတ်လား။ ငါးစိမ်းသည်ဘ၀ ပြောင်းလိုက်ရတာ။ မပြောင်းလို့လဲ မဖြစ်ဘူး ဒီခောတ် ကန်းဇွန်းရွက် တစ်စီးနှစ်ရာ လောက်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် ဘွဲ့လေးတစ်ခုတောင် မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ် ယောက်အနေနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ မောင်လေးကျောင်းစားရိတ် နဲ့အမေ့အတွက် ဒီလိုမှ အကုသိုလ်နဲ့ ငွေမရှာရင် ကျွန်မလိုမိန်းမမျိုး ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရ ဟိုလိုမိန်းမပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့။
နှိမ်ပြောတာ မဟုတ်ရပါဘူး။ တစ်ကယ်တော့ ဒီခောတ်ဒီအခါ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ပိုက်ဆံဆိုတာရှာရတာကိုးက ခက်နေတာ လူတိုင်းလဲသိနေကြတာပဲ။ ကိုယ်တိုင်က အငတ်ခံနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်မောင် ငတ်နေတော့လည်း မျက်စိစုံမိတ်ပြီး မတတ်နိုင်ဘူးလေ လို့ ပြောနိုင်တဲ့ အသည်းနှလုံးမှ မရှိခဲ့ပဲ။ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ အကြောင်းပြချက်ကလေးတော့ ရှိကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အရေးကြီးတာက ကိုယ်လုပ်နေတာကို ကိုယ်တိုင်အမှားအမှန် သိဖို့လိုတာပါ။ ငါးရောင်းတယ်ဆိုမှတော့ ရှင်တာလဲပါတာပေါ့လေ။
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ မျက်လုံးစုံမှိတ်လို့ သတ်ရတာပဲ။ အကုသိုလ်နဲ့တော့ ကျွန်မမပျော်ပါဘူး။တစ်ကယ်ပါ။ သို့ပေမယ့် ကံဆိုတာကလဲ ခက်သားလား။ စီးပွားရေးများတက်လာလိုက်တာ ဒီရေအလား။ ပထမ ကျွန်မငါးရောင်းတဲ့ဆိုင်လေး ကိုယ်ပိုင်ဝယ်လိုက်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဒီခောတ်စကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က နှစ်လုံးထိုးတာ ဗိုက်နာနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ။
ဒီတော့ ဗိုက်နာတဲ့ဈေးလေးနဲ့ ကျွန်မ၀ယ်လိုက်နိုင် တယ်။ ပြီးရက်ကွက်ထဲ ငွေတိုးချေးစားတာလဲ ကျွန်မပဲ။ ပြောရရင် ကျွန်မနဲ့ ကိုက်တယ်ပေါ့။ ကျွန်မက အော်နိုင်တာကိုး။ ပြောနိုင်တာကိုး။သို့ပေမယ့် မရှိတဲ့ လူတွေဆို ကျွန်မကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ နိုင်ထက်စီးနင်းမလုပ်တတ်ဘူး။ ခက်တာကလူတွေပဲလေ တစ်ချို့ကြတော့လဲ တစ်ကယ်ကို ဒုက္ခ ရောက်တာ။ တစ်ချို့ဆိုလည်း သူများပိုက်ဆံယူပြီး ပြန်မပေးချင်တာ။ အို လူအမျိုးမျိုးစရိုက် အဖုံဖုံပါပဲ။
ဟောခုဆိုရင်.. ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးတောင် ၀ယ် ထားလိုက်နိုင်တာ။ အမယ်လေး ဒီတော့ ရပ်ကွက်ထဲက ဘာပြောကြတယ် မှတ်သလဲ။ အကုသိုလ်နဲ့မှ စီးပွားဖြစ် တာတဲ့လေ။ နောက်ပြီး ငါးယူနေကြ ငါးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒိုင်နဲ့က ဘာလိုလို ပြောနေကြသေးတာ။ မျက်နှာလေးပြစားတယ်ဆိုလားပဲ။ ဒေါသတွေထွက်လိုက်တာ။ ပြီးတော့ ပြောရက်လိုက်ကြတာ။ ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးခဲ့သလဲဆို ငယ်ချစ်ဦးကတောင် တစ်ကယ်ပဲဖြစ်နေသလိုလိုနဲ့ သံသယတွေ ၀င်ပြီး ကွဲကွာသွားကြတဲ့အထိ။
ရက်ကွက်ထဲက မိန်းမတွေပါးစပ်များ အဲဒီထဲက စိတ်ကလဲနာ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဂရုစိုက်ချင်စိတ်လဲ မရှိ်တော့ဘူး။ သူတို့လဲပြောချင်ရာပြော ကျွန်မလဲ ကျွန်မလုပ် စရာရှိတာလုပ်တယ်။ရှေ့တင်လာပြီး စောင်းသလို ရွှဲ့သလိုဆိုရင်တော့ ပါးစပ်နဲ့မပြောဘူး လက်နဲ့ကိုပြောပစ်လိုက်တယ်။ ကဲ ဘယ်သူ ပြောရဲသေးလဲ။ဒီတော့ ကျွန်မကကြမ်းတယ်ပေါ့။ ရိုင်းတယ်ပေါ့။ ရှင်တို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်လေ သူတို့ကမှ မကောင်းတော့ ကျွန်မလဲ မကောင်းနိုင် တော့ဘူး။
ဘာပြောကောင်းမလဲ ကျွန်မနဲ့ မတည့်တဲ့ ကောင်မတွေများ ငွေတိုးယူထားလို့ကတော့ ငါးပါးမှောက်ပြီ သာမှတ်။နောက်ပြီး ဒီလိုအချိန် ဒီလိုအခါက နှစ်လုံးတို့ဘာတို့ နှိပ်စက်တဲ့ အချိန်မဟုတ်လား။ ခောတ်ပျက်သူဌေးပဲခေါ်ခေါ် ။အပိုင်လုပ်ပြီးသူတို့နေတဲ့ အိမ်တွေကို အတိုးနဲ့သတ် ပြီးပွဲစားနဲ့ပေါင်းပြီးရောင်း ကျွန်မအကြွေးလဲရ ပွဲစားခငွေလေးလဲ ခပ်မြတ်မြတ်လေးရ။ကဲ မပိုင်ဘူးလား။ ကောင်မတွေလား အမယ်လေး ငိုကြတာပေါ့။ တောင်းပန်ကြတာပေါ့ ငိုလဲ မသနားနိုင်ဘူး။ အရင်သူတို့အလှည့်တုန်းက လုပ်ထားတာ..အလှည့်ကျတော့ မနွဲ့စတမ်းပေါ့အေ လို့ မျက်စလေးချီ ထမိန်လေးမပြီး ကျောခိုင်းလိုက်ရတာကိုးက အရသာ။
ကျွန်မက အတေးအမှတ်ကြီးတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်နစ်နာအောင်လုပ်ထားပြီဆိုရင် အချိန်ဘယ်လောက်ပဲကြာကြာ မှတ်ထားပြီး ကျွန်မအလှည့်ဟေ့ဆိုတာကို ရောက်အောင်စောင့်တာ။ ကိုယ့်အလှည့်တုန်းကလဲ ခံစရာရှိ ကိုယ်က လိမ့်ပိန့်ပြီး ခံထားရတာမဟုတ်လား။ ခုသူတို့အလှည့် ဘာငဲ့စရာ ရှိတုန်း။ ပေဖြစ်တုန်းက ခံခဲ့ပြီးပြီပဲ တူဖြစ်တဲ့ အလှည့်မှ သနားပါရှင် ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့ ဟောဒီက ကျော့မေ တို့က ပြီးပြီးရော လက်ခံလိုက်ရမတဲ့လား။
ငါးဆိုင်ပိုင်ရှင်မိန်းမက အဆိုးဆုံး။ သူကလဲပိုက်ဆံလိုလို့ ကိုယ်ကလဲ ဒီပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်နိုင်လို့ ၀ယ်တာကိုပဲ။ သူ့မှာ မကျေနပ်ဘူး။ ကျွန်မ ထင်တာတော့ စီးပွားရေးတက်လာတော့ မလိုမုန်းထား ဘ၀တူအချင်းချင်း မနာလိုတာပိုများပေါ့။ ဒီတော့ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ အတင်းကနေ သတင်းတွေဖြစ်တော့တာပဲကိုး။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မက ရပ်ကွက်ထဲ နာမည်ပျက်တာပဲ အဖတ်တင်တော့ပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တွေးကြည့်ပြန်တော့လဲ တန်ပါတယ်လေ။ ကျွန်မအမေ ကျွန်မမောင်လေး လူတန်းစေ့စားနိုင် နေနိုင် ကျောင်းတက်နိုင်။ အမေ နဲ့မောင်လေးကတော့ ပြောပါတယ်။ ဒီအကုသိုလ် အလုပ် သူများ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျမှ ရတဲ့ပိုက်ဆံ တွေကို ရပ်လိုက်ပါတော့တဲ့။ နို့ပေမယ့် လူ့စိတ်ဆိုတာက ခက်သားပဲ မဟုတ်လား။ ဒီအလုပ်နဲ့မှ ဒီလိုဖြစ်လာတာဆိုတော့ ကျွန်မကတော့ မစွန့်နိုင် ဘူး။
လောဘက ဦးဆောင်နေတာကိုး။ အလှူအတန်းတော့ ရက်ရောတယ်။ နှမျှောတယ် တွန့်တိုတယ်လို့ မရှိ်ဘူး။ ရွက်ကွက်ထဲ သာ ရေးနာရေးဆို ရှေ့ဆုံးကနေကို လှူ တာ။ ဒီတော့ ရပ်ကွက်ထဲက မိန်းမတွေများ ဘာပြောတယ်မှတ်တုန်း။ အမယ်လေး ငါးစိမ်းသည်မက သူဌေးနာမည်ခံနေပါရောလားဆိုပဲ။ လှူ လိုက်တာတော့ ကျုပ်လှူ တာပေါ့။ ဈေးသည် ဈေးထဲဆိုတော့လဲ သတင်းကအကုန်ပြန် ကြားရတာ။ စေတနာတစ်ကျပ်ဖိုးအပြင် ဒေါသနဲ့မောဟပါ ထည့်ပေါင်းတော့ကုသိုလ်ကတစ်ပဲ ငရဲကတစ်ပိဿ
ပြန်ပြီးကြားကြားနေရတဲ့ သတင်းစကား အတင်းတွေကြောင့် ကျွန်မစိတ်မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒေါသ၊မာန နဲ့ မောဟမီးများ လောင်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့။ နားရတယ်ကိုးမရှိဘူး။ ဒီကြားထဲ လုပ်နေတာက ငါးရောင်းတာ။ ငါးကလဲ သတ်ရင်းသတ်ရင်း လက်ကလဲယဉ်လာလိုက်တာ။ မနောကံနဲ့ပါ ကျူးး လွန်မိလာတယ်။ အဲဒီပြောနေတဲ့ ကောင်မတွေကိုလဲ ငါးတွေရဲ့ ခေါင်းကို ဓါးမနဲ့ တိကနဲ ဖြတ်လိုက်သလို ဒင်းတို့ကိုပါ တိကနဲ ဖြတ်ချင်လာတယ်။
ကျွန်မမှားနေလို့ ပြောတယ်ဆိုပြောပါ။ အချိန်ပြည့်စိတ်ထဲမှာ ဒေါသ မာန မခံချင်စိတ် ငါဆိုတဲ့ မာန်အမယ်လေး အားရတယ်ကိုးမရှိပါဘူး။ကိုယ်မှမဟုတ်တဲ့ဟာကို ဒင်းတို့က တစ်စိတ်တစ်အိတ်လုပ်ပြီးပြောနေတာ ရင်ထဲမှာခံပြင်းလွန်းလို့။ဘယ်လောက်တောင်လဲဆို ကျွန်မရဲ့မျက်နှာမှာ ဒေါသရဲ့ အရှိန်နဲ့အချိန်ပြည့် နီမြန်းလာတယ်။ အရင်လိုစကားတွေ မချို သာနိုင်တော့ ဘူး။ ပိုက်ဆံလေးလဲရှိလာတော့ မာန်ဆိုတာလေးကလဲ ရောက်လာပြီးကိုး။
ဒီတော့ ဒင်းတို့က ဆိုကြပြန်သေးတာ ကျွန်မက အသက်ကြီးလေ မိုက်လုံးကြီးလေတဲ့။ ဒီလိုဆိုကြပြန်တာလား။ ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေကလဲ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရပေါ့။ ပူလောင်လိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့ နေ့တိုင်းအဲဒီခံပြင်းတဲ့ စိတ်ကြီးနဲ့နေရတာ။ ဒီကြားထဲ ကျွန်မခေါင်းကလဲ ပိုပိုပြီး ကိုက်လာတယ်။ဆေးခန်းပြ ခဏပါပဲ။ နောက်နေ့ ပြန်ကိုက်မထနိုင်ဘူး။ထင်တော့ ငါးတွေရဲ့ခေါင်းကို ထုထုသတ်ခဲ့တဲ့ဝဋ်ကတော့ ဘ၀မကူးခင်လည်ပြီထင်ပ။
ဒီကြားထဲ ခေါင်းကကိုက်နေတာတောင် စိတ်ထဲဂယောင်ဂတမ်းနဲ့ ငါးခေါင်းတွေ ထုနေသေးတာ။ ဒီလိုနဲ့ ကျန်းမာရေးကလဲ တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေ ဒီကြားထဲ အမေကလဲ အသက်ကြီးတော့ဆုံးသွားပြန် မောင်လေးကလဲ အရွယ်ရောက်ပြီ ပညာလဲစုံ ကြင်ယာလဲစုံပြီးပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်လိုက်တာ။ အသက်ကလေးကလဲ ရလာ ဘ၀ကလဲ ကြမ်းဆိုတော့ ဇရာရဲ့နှိပ်စက်ချင်းကို လူးလိမ့်ပြီးခံရတော့တာပဲ။
ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာကလဲ တေးထားတဲ့ အာဂတတွေ လုပ်နေတဲ့ အကုသိုလ်တွေ လောဘတွေ မောဟတွေ မာန်တွေမချနိုင်သေးတော့ ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ပိုကြီးနေသလားမှတ်ရတယ်။ ဒါတောင် လူတွေကပြောနေသေး တာ အဲဒီမိန်းမကြီး သေရင်ဥစ္စာစောင့်ဖြစ်မှာတဲ့လေ။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်စောင့်တာ ဘာဖြစ်တုန်း။ ဒင်းတို့အပူလား။ အသက်ကကြီးလေ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်လေ ဒေါသကပိုကြီးလေ အပေါက်ကပိုဆိုးလာလေနဲ့ သံသရာလည်နေတာမပြောပါနဲ့တော့။
ကျွန်မတို့ ရပ်ကွက်ထဲ ၁၀ ရက်တရားစခန်းဖွင့်တယ်။ အလှူ ဆိုရင်တော့ ကျွန်မကရှေ့ဆုံးကပေါ့။ ဒီတော့ ရက်ကွက်ကလူကြီး တွေက တိုက်တွန်းတယ်။ လှူ လဲလှူ ကိုယ်တိုင်လဲ ရိပ်သာစခန်းဝင်ပေါ့။ ပြောလွန်းမက ပြောကြလွန်းတော့လဲ အားနာတာနဲ့ လိုက်ဝင်ဖြစ်တာပေါ့။ ပထမရက်မှာပဲ ငါးဆိုင်ကိုကြီး စိတ်ကမြင်နေတာ။ ပြီးတော့ ငါးတွေကလဲ ယူထားပြီးသားဆို တော့ ပိတ်လို့ကလဲမရဘူးလေ။
ဒီတော့ သူများကို ရောင်းခိုင်းခဲ့ရတာ။ အဆင်မှ ပြေပါ့မလား။ ရှုံးများနေပြီလား။ မျက်စိထဲ သတ်ထားတဲ့ သွေးသံရဲရဲနဲ့ ငါးတွေပြန်မြင်လာလိုက်။ စိတ်ထဲမှာ အော်ဟစ်နေချင်တာများ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ။ အလိုလိုနေရင်း စိတ်ထဲမှာ ဒေါသတွေကထွက်။ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ဟိုးနာက နာချင်သလိုလို ဒီနားက နာချင်သလိုလို ဒီကြားထဲ ခေါင်းကလဲ ကိုက်သေးတယ်။ ပြီး ငြိမ်ပြီးထိုင်နေရတာကိုးက ကျွန်မအတွက် ဒုက္ခ ။ ရိပ်သာမ၀င်ခင်က အလုပ်နဲ့လုပ် ပြတ်တယ်မှ မရှိပဲ။ အင်း ဒီလိုဆိုရင်တော့ ခက်ရချေရဲ့။ ရက်ကွက်ထဲ လူကြီးတွေပြောပြီး ထွက်ပစ်လိုက်ဖို့ကို ခဏခဏ စိတ်ကူးမိတယ်။ ၄ ရက်မြောက်ညဘက် အရောက် အိပ်ခါနီးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် မနက်ဖြန်မနက် ရိပ်သာကနေထွက်တော့မယ်။ ဘယ်..ဒီလိုသာဆို ကျွန်မ ရူးသွားနိုင်တယ်။
မနက်မိုးလင်းအိပ်ယာကနိုးတော့ လူတွေရုတ်ရုတ်ဖြစ်နေတယ်။ ဘာများပါလိမ့်ပေါ့။ အမယ်လေး ကျွန်မရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတစ် ယောက်လေ အိပ်နေရင်းနဲ့ ဆုံးသွားပါရောလား။ မနက်မိုးလင်း သူ့ဘေးက တူတူအိပ်တဲ့ မိန်းမက ခေါ်ကြည့်လို့မရတော့မှ ဆုံးမှန်းသိတယ်တဲ့။ သူ့ကြည့်ရတာ ဝေဒနာတော့ တော်တော်ခံစားသွားရပုံပဲ။ သူ့ရဲ့လက်တွေက အိပ်ယာခင်းကို ကိုင်ပြီးဆုပ်ထားတာ တော်တော်နဲ့ဖြည်လို့မရဘူး။ပြီးမျက်လုံးကလဲ တစ်ဝက်ကပွင့်နေသေးတယ်။ ကြည့်ရဆိုးလိုက်တာလို့ စိတ်ကတွေးနေသလို စိတ်ထဲမှာလဲ သူ့ကိုသနား သွားတယ်။ အော် သေသွားတော့လဲ ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ တွေးလိုက်မိတယ်။
ဒါဆိုရင် ငါကိုယ်တိုင်ရော သေဖို့အသင့်ပဲလားလို့ စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ ကျွန်မလဲ သေသွားနိုင်တာပဲမဟုတ် လား။ အဲဒီတော့မှ ကြောက်လိုက်တာ။ ဘုရား ဘုရား လို့တမိတယ်။ ခုလောလောဆယ် ဒီခန္ဓာကြီးမှာ ဘာရောဂါမှ မခံစားရတာတောင် ကျွန်မရဲ့ လောဘ ဒေါသ နဲ့ မောဟတွေကို သတ်လို့မရတာ။ ဒီခန္ဓာကြီး နာနေတဲ့အချိန်များဆို ကျွန်မ ဘယ်လိုများ တရားသိတော့မှာတုန်း။
တရားမသိဘူးဆိုမှတော့ နောက်ဘ၀ ငရဲကျမလား သံသရာမှာ ဘယ်လိုခန္ဓာမျိုးနဲ့ ဒုက္ခတွေခံ ရလိမ့်မလဲ ။ ခန္ဓာရပြန်တော့ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေဖြစ်။ ဒီကြားထဲ ကျွန်မမှာ ငါးတွေကို သတ်ထားတဲ့ဝဋ်ကြွေးဆိုတာရှိသေးတယ်။
မတ်တပ်ရပ်လို့ သေဆုံးသူရန်သူတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မဒူးတွေ တုန်လာတယ်။ ရင်ထဲမှာလဲ တစ်လျှပ်လျှပ်ဖြစ်လာတယ်။ ဘုရား..ဘုရားဆိုပြီးတနေတာ လဲ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့အသိကလေး လျှပ်ကနဲ တစ်ချက်ဝင်လာတယ်။
မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး ဒီဘ၀ ဒီသံသရာကတော့ လွတ်အောင်ကို ရုန်းနိုင်မှ ဖြစ်တော့မယ်လို့။
အကြံကုန်တော့ ဆားချက်ဆိုသလို အရင်တင်ပြီးသား ပို့(စ်) အဟောင်းလေးကို ပြင်စရာရှိတာလေးတွေ ပြင်ပြီ ဒီတစ်ပတ်အတွက် ပို့(စ်) အသစ်လေး လုပ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
ဘလော့လေးမှာ လာရောက်ပြီး စာဖတ်သူများနှင့် တစ်ကွ ဘလော့ မောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။
ချစ်တတ်လာပြီလား ဒါဆိုရင် မင်းဟာ ရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ ချည်ထွေးထဲက ချည်စတစ်ခုကို မင်းအစဆွဲလိုက် ပြီသာ မှတ်ပေတော့။ ချစ်တတ်လာပြီဆိုရင် မင်းကိုယ်မင်းလှပအောင် ပြင်တော့မယ်။ မင်းဟာ.. ဖူးသစ်စပန်းပွင့်လေးကဲ့သို့ နုပျိုလန်းဆန်းနေ တော့မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချစ်ရတာကို မင်းပျော်နေတာကိုး။ မင်းချစ်သူက မင်းကိုလှလှပပ တက်တက်ကြွကြွလေး မြင်နေစေချင်တာကိုး။
ဟော..တွေ့ဖန်များ ချစ်ဖန်များတော့ မင်းမှာ သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ သမုဒယကြိုး ကြာလေ ကြီးလေ ခိုင်မြဲလေ။ သံယောဇဉ်လာပြီဆိုရင် မင်း လွမ်းလာပြီ..တမ်းတလာပြီး အချိန်တိုင်းမင်းချစ်သူဘေးနားမှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် တီတီတာတာ နဲ့ နေချင်တဲ့စိတ် ချစ်သူကို အားကိုးတွယ်တာလာတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ လွမ်းဆွတ်တတ်လာပြီ။ တစ်နည်းပြောရရင်..
မင်းရဲ့ ရောဂါဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား အမြစ်တွယ်စပြုလာပြီ။ အဲဒီမှာ တစ်ခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပါလာတော့တာပဲ။ မင်းရဲ့ အချစ်က အဖြူရောင် ဒါပေမယ့် အတ္တရယ် မာနရယ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်..
ဟေ..မင်း သ၀န်တိုတတ်တယ်။ ဟယ် ..မာနလဲကြီးတတ်တယ်။ သူကဘာမို့လို့လဲ ငါ့ဘေးနားမှာများ သူ့ထက်သာတာ အပုံကြီး။ ချိန်းထားတဲ့အချိန်ကို မတိကျဘူး။ ငါ့ကို အလေးအနက်မထားဘူး။ ငါ့မှာတော့ ချစ်လိုက်ရတာ ။သူကတော့ င့ါကိုမေ့နေတယ်။ ဒီတော့ တွေ့တဲ့အချိန် လာတဲ့ အချိန် စိတ်ကောက်တာက စပြီ။ မင်းရဲ့ စိတ်တွေဟာ အချစ်ကြောင့် ပူလောင်စပြုလာပြီ။ အဲလိုမဟုတ်ရင်လဲ ချစ်သူနဲ့သာ တူတူဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဘ၀လေးကို တည်ဆောက်ဖို့ မင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပြီ။
ဒီနေရာမှာ စိတ်ကူးယဉ် မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ တစ်ကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစား အားထုတ်ဖို့ လိုလာပြီ။ လက်တွေ့ဆိုတဲ့စကား ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ စကားပါလာပြီဆိုတာနဲ့ နားလည်လိုက်ဖို့က မင်းဟာ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ရတော့မယ်။ မင်းကိုယ်တိုင်ရော မင်းရဲ့ လက်တွဲဖော် နှစ်ဦးစလုံးက တက်ညီလက်ညီ ပြိုင်တူ ရွက်လွင့်ဖို့လိုလာပြီ။ ဒီတော့မင်းရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို မင်းက တွန်းအားပေးတော့မယ်။ လက်တွဲဖော်က ကိုတွန်းသလို ရွှေ့နေရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့ မရွှေ့တဲ့အခါကျတော့ မင်း စိတ်ဆိုးလာပြီ အားမလို အားမရ ဒေါသတွေ ထွက်လာပြီ။ စိတ်ပါ တော့ နှုတ်ကပါ အပြောလေးတွေက ထေ့လာပြီ။
ဒီအခြေအနေမှာ ကြားခံမီဒီယာလိုလာတာက နားလည်မှု သဘောထားကြီးမှုတွေပဲ။ အဲဒီအရာတွေဟာ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ရှိမနေတော့ ဘူးဆိုရင် ဒါ သေချာသွားပြီ လွမ်းခွဲမှာ ဆိုဖို့ စကားလေးတစ်ခွန်းတောင် မရှိတော့တဲ့ သူတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ အဲ ဒီတစ်ယောက်နဲ့ ကွဲသွားလို့ မင်းမှာ အချစ်တွေ သေသွားပြီလားလို့ မထင်လိုက်လေနဲ့ မင်းဟာစပြီး ချစ်တတ်ပြီးသွားပြီ။ ဒီတော့ မင်းအသက်ရှင်နေသမျှ အချစ်ကရှင်သန်နေမှာပဲ။ ရှင်သန်နေအုန်းမှာပဲ။
ဒါပေမယ့် ရှင်သန်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဆွေးမြေ့မယ် နာကြင်မယ် ပျော်ခဲ့ဖူး မော်ခဲ့ဖူးတာလေးတွေ ကို တမ်းတမယ်။ အတိတ်ကာလကို စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ ပျံသန်းမယ် အနာဂတ်ကို အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းတယ်။ နောက်ထပ် မင်းရဲ့နှလုံးသားက လက်ခံနိုင်မယ့် အချစ်ကို မတွေ့မချင်း ဆိုပါတော့.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းဟာ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ချည်ခင်ထဲက ချည်တစ်စကို ဆွဲထုတ်လိုက်မိလို့ပဲ။အဲဒါက ချည်ခင်ရှုပ်ပုံ ရှုပ်နည်းတစ်မျိုး နောက်တစ်မျိုးလဲ ရှိသေးလေရဲ့။
အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ တက်ညီလက်ညီ လှော်လိုက်တော့ ပန်းတိုင်ရောက်သွားကြ တာပေါ့။ ဒီအခြေအနေက ချည်ခင်ကို ဆွဲထုတ်ရုံတင်မကဘူး ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ်ပြန်ချည်ထားတဲ့ အခြေအနေရောက် သွားပြီ။ အစပိုင်းတော့ ရှင်းမယ်အထင်နဲ့ တစ်စလေးဆွဲလိုက် ကိုယ့်ရဲ့လက်ကို တစ်ပတ်လေးပတ်လိုက် အမယ် တယ်ဟုတ်တဲ့ ငါပါလားပေါ့။ ကိုယ်ကလဲ ရှင်းတာလေးတွေ့သွားတာကိုး ပျော်လာတယ်။ ရွှင်လာတယ်။
ခက်တာက အချိန်တွေသာကြာလာတယ် ချည်ခင်ထွေးက ရှုပ်နေတာက မပြေနိုင်သေးဘူး။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ ရှင်းနိုး တစ်နေ့ရှင်းနိုးနဲ့ ချည်ခင်ထွေးကြီး ရှင်းလိုက်တာ ဟော..နောက်ဆုံးကျတော့ သားတွေ သမီးတွေနဲ့ ပျော်ကြ ရွှင်ကြ မုန်တိုင်းထဲ ဖြတ်လိုက်ကြ သောကတွေ ရောက်လိုက် ရန်တွေဖြစ်လိုက် ချစ်လိုက်ကြ မုန်းလိုက်ကြ ပြောလိုက်ကြ ဆိုလိုက်ကြနဲ့ အဲဒီ ချည်ခင်ထွေးကြီးရဲ့ အလယ်ဗဟိုထဲက ရစ်ဘီးကြီးက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
ကဲ.. ဒါပေမယ့် ဘာပဲပြောပြောပါ တစ်ချို့ကြတော့လဲ ရစ်ဘီးကြီးလို လည်နေရတာကို ပျော်ကြတယ်။ ချည်လေးတွေ အပတ်ခံနေရတာကိုးက ပျော်နေတတ်တာ။ တစ်ချို့ကျတော့လဲ ချည်လေးတစ်စ ဆွဲမိနေရင်း ငါ ဆက်ရှင်းနေရင်ရော ရှင်းပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယလေးနဲ့ ဆက်ရှင်းရကောင်းနိုးနိုး ရပ်လိုက်ရကောင်းနိုးနိုး နဲ့အတွေးနယ်ချဲ့ကြပြန်တယ်။ တစ်ချို့ကြပြန်တော့ အမယ်လေး ကြောက်လှပါပီဟယ် ..ဆိုပြီ ခပ်ဝေးဝေးက ကွေ့ပတ်ပြေးကြတယ်။
ခုစာဖတ်နေတဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်ရော..ဘယ်လိုလူမျိုးပါလိမ့် စာရေးသူကိုယ်တိုင်ကတော့ အစလေးဆွဲပြီး ရှုပ်ရှုပ်လာတာ မခံနိုင်လို့ အမယ်လေးကြောက်လှပါပီဟယ် ဆိုပြီး ကွေ့ပတ်ပြေးနေရတဲ့ သူဖြစ်ပါကြောင်း ၀န်ခံရင်း .. ကဲ ..သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့ရေ ဆက်ပြီး ချည်ခင်ထွေးကြီး ရှင်းလိုက်ကြစို့ရဲ့.
ဘလော့ လေးကို လာလည်ကြတော့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးနှင့် တစ်ကွ ဘလော့ မောင်နှမများ အားလုံး ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။
သရုပ်ဖော် ပုံလေးကိုတော့ google ကနေရှာပြီ ယူသုံးထားပါတယ်လို့..